Félix de Azúa: nhetembo, zvinyorwa uye nhoroondo yepamusoro-soro | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Novela, Nhetembo
Félix de Azúa munyori wechiSpanish anofungidzirwa semumwe wevanonyanya kuzivisa mabhuku ezana ramakore rechiXNUMX. Akamira semunyori, munyori wenhau, uye munyori wenyaya; maficha maakaratidzira rima uye kunyangwe chimiro chehusiku. Munguva yebasa rake akwanisa kuhwina mibairo yakati wandei, senge mubairo weHerralde de Novela uye iyo Caballero Bonald International Essay mubairo.
Uyewo akachengetedza rake rehunyanzvi padhuze nekudzidzisa uye utapi venhau. Muna 2011, akaburitsa chinyorwa chake "Against Jeremías" mupepanhau Nyika, iyo yaakawana nayo César González-Ruano kuzivikanwa kweJenhau. Kwegore ra2015 akapinda muboka rakasarudzwa re nhengo dzeRoyal Spanish Academy, uko H.
1 Ipfupi biography yemunyori
1.1 Hupenyu hwema Labour
2 Chinyorwa basa raFélix de Azúa
2.1.1 Nhetembo basa remunyori
2.2.1 Basa rekurondedzera
3 Mamwe mabhuku akanyorwa naFélix de Azúa
3.1 Nhau yebenzi sezvakataurwa naiye ega kana Izvo zvemukati zvemufaro (1986)
3.2 Diary yemurume anonyadziswa (1987)
3.3 Shanduko mureza (1991)
3.4 Ropa Rokupedzisira (Nhetembo 1968-2007) (2007)
3.5 Pepa Autobiography (2013)
Ipfupi biography yemunyori
Munyori Félix de Azúa akazvarwa neSvondo Kubvumbi 30, 1944 muguta reSpain reBarcelona. Mushure mekupedza chikoro chesekondari, vakapinda University of Barcelona, kwaakapedza kudzidza seakapedza kudzidza muFilosofi neTsamba. Makore gare gare, mune imwechete imba yezvidzidzo, akawana dhigirii repamusoro rekuyunivhesiti: Chiremba weFilosofi.
Hupenyu hwema Labour
Pakutanga kwema80, akashanda semupurofesa mune Sachigaro weFilosofi neSainzi kuYunivhesiti yeBasque Nyika. Makore gare gare, akadzidzisa makirasi muAesthetics uye Theory of Arts kuPolytechnic University yeCatalonia. Gare gare, akatungamira iyo Cervantes Institute muParis (1993-1995). Parizvino anoshanda nevamwe veSpanish vakanyorwa midhiya, senge Pepanhau reCatalonia y Nyika.
Chinyorwa basa raFélix de Azúa
Akatanga mune yekunyora nyika sanyanduri kuburikidza nekuburitswa kwe: Otter masheya (1968), wekutanga pane vapfumbamwe mabhuku enhetembo. Kubva ipapo akave achionekwa sechikamu che "chitsva" chizvarwa; kwete pasina, muna 1970 yakaverengerwa muanthology Vapfumbamwe vatsva vanyori veSpanish. Iye munyori wechiCatalan anozivikanwa nemazwi ake akavharwa uye anotonhora, aine madingindira nezve kusakosha uye kusava nechinhu.
Nhetembo basa remunyori
Otter masheya (1968)
Vheiri pachiso cheAgamemnon (1966-1969) (1970)
Edgar muStéphane (1971)
Lime rurimi (1972)
Pasa nenziyo nomwe (1977)
Nhetembo Anthology (1968-1978) (1979)
Nhetembo Anthology (1968-1989) (1989)
Yekupedzisira Ropa Anthology (Nhetembo 1968-2007) (2007)
Muna 1972, munyori akapa rondedzero yake yekutanga: Zvidzidzo zveJena; kubva ipapo akaburitsa yakazara ye9 mabasa eiri mhando. Pakati pemabasa ake semunyori wenhau anomira pachena Dhayari remurume anonyadziswa (1987), iyo yaakatora nayo Herralde de Novela mubairo gore rimwe chete. Kubudikidza nechinyoreso chake, veSpanish vakabata chimiro umo satirism uye irony zvinokunda.
Zvidzidzo zveJena (1972)
Zvidzidzo zvakamiswa (1978)
Chidzidzo chekupedzisira (1981)
Nyaya yebenzi sezvakataurwa naiye ega kana Izvo zvemukati zvemufaro (1986)
Dhayari remurume anonyadziswa (1987)
Shanduko mureza (1991)
Mibvunzo yakawandisa (1994)
Nguva dzekufunga (2000)
Munyori anoonekwa seimwe yeiyo vanyori inonyanya kuzivikanwa muSpain; Muhupenyu hwake hwese akaburitsa anopfuura makumi maviri nemashanu mabhuku mune ino dhiraini genre. Chikamu chekuzivikanwa kwake kwakauya mu2014 neCaballero Bonald International Essay Mubairo, nekuda kwebasa rake: Mapepa ehupenyu (2013). Chikamu chake chekupedzisira mune iyi fomati chaive: Chechitatu chiito (2020).
Mamwe mabhuku akanyorwa naFélix de Azúa
Iyo inoverengeka inoitika muSpain pakati pezana ramakore rechimakumi maviri, ichangopera Hondo Yenyika. Iyo protagonist inogadzira kutarisisa kwehupenyu hwayo hwese, kubva paudiki kusvika mukukura. Chinangwa chayo chikuru ndechekuyera mufaro mune yega yega nhanho idzi, pamusoro pekufunga mimwe mirawo, senge: chitendero, rudo uye hukama hwepabonde; zvematongerwo enyika, pakati pevamwe.
Paunenge uchiongorora mimwe mifananidzo kubva achiri mudiki, iwe uchasangana neiyo imwe iyo yaanoratidzwa achinyemwerera, iyo chero munhu aigona kududzira semufaro. Asi, ndipo apo izvi inotanga kusahadzika nezveichi chirevo, chakasiyana pamberi pekutsvaga kwekufara kwemunhu. Sokunge kwaive kuyedza kwerabhoritari, achatonga kunze akasiyana mamiriro imwe neimwe kuti asimbise dzidziso yake.
Nyaya yebenzi ...
Iyo nhema dema yakaiswa muBarcelona, ​​iyo inotsanangura nyaya yemurume anopfuura makore makumi mana ekuberekwa, uyo anorondedzera zviitiko zvehupenyu hwake mumunhu wekutanga. Kwaari, kuvharirwa ndicho chinhu chega chinopa chirevo kuhupenyu hwevanhu, fungidziro inoratidzirwa mune dzinoverengeka ndangariro muchikamu chose. Izvi zvakapatsanurwa kuita zvidimbu zvitatu: "A Banal Man", "The Danger of Banality" uye "Kuuraya Dhiragoni".
Muzvikamu zviviri zvekutanga kumashure kwemhuri yem protagonist uye zvaakasangana nazvo mune dzimwe nharaunda dzeBarcelona zvinorondedzerwa. Aripo, achasangana nemhomho yaachaguma achishanda nayo mushure mekuwana kuvimba kwake. Muchidimbu chekupedzisira, ane makore mana-makore anozonyudzwa munzvimbo yekuzviparadza, kubva kune iye mukuru wake anoedza kumununura.
Dhayari remurume ...
Iyo inoverengeka yakarongedzwa muBasque Nyika muma30, iyo inorondedzerwa muchimiro chechido. Semunhu mukuru inoratidzira bourgeois, uyo, achizvitenda semunhu anofarira nyika, anozadzwa mukutsvaga ndege yekurwisa muvengi ega. Mutambi mukuru achafanirwa kuita nharo pakati pekuvimbika kunyika yake kana kuve gamba "rinotengesa" kukunda mhandu.
Sezvo iwe ukatarisana neyako kushamisika, iwe uchafanirwa kutarisana nechaunga chevanyengeri. Anoda Navarrese, gudari anotyisa, mupirisiti wepfungwa uye gweta reFalangist vanozove chikamu chenyaya iyi.. Pakutanga, zano rinokura riine mutinhimira unononoka uye unovhiringidza, asi zvishoma nezvishoma zvinomhanyisa kuratidza pakupedzisira chirahwe apo zvidimbu zvese zvinowirirana zvakakwana.
Munyori anoreurura mubvunzurudzo kupepanhau Nyika, ndiani akagadzira novel nekubatanidza nyaya mbiri chaidzo. Imwe, nezve baba vemusikana wake wekutanga wepamutemo, muRepublican uye munin'ina wenyika akashushikana nekudyara mari yake pakurwisa Franco. Uye imwe yacho, mutambo wemumiriri weItaly waakasangana naye makore gumi nemashanu gare gare, aive munhaurirano dzekutambidza Nyika yeBasque kuItari.
Shanduko mureza ....
Ropa rekupedzisira (Nhetembo 1968-2007) (2007)
Muunganidzwa uyu wenhetembo wakapihwa muna 2007 unosanganisira makore angangosvika makumi mana ebhuku renhetembo remunyori, iro rinosanganisirawo zvimwe zvisina kunyorwa. Mubhuku rino unogona kuona shanduko uye yakasarudzika manyorero emunyori, iyo yakashamisa vaverengi vese muma70. Iyo anthology ine nhetembo dzekufananidzira, idzo dzisina kumboburitswazve kusvika ipapo.
ROPA ROKUPEDZISIRA (Nhetembo ...
Mapepa ehupenyu (2013)
Icho chinyorwa umo munyori anopa kushanya kuburikidza nezvaakaona mune akasiyana mavara ezvinyorwa. Pakati pemitsara anorondedzera mavambo ake semunyori wenhanho, nhanho dzake kuburikidza nemanoveli uye kuoma kwenyaya yacho. Iye anotsanangura zvakare yake foray muutapi venhau, mhando iyo yaanofunga kuti ndiyo yakabudirira kwazvo zvine chekuita neazvino chokwadi chatiri kurarama.
Neichi chinyorwa, munyori anotsvaga kupa yake maonero ekuti marudzi ese ezvinyorwa akashanduka sei zvishoma nezvishoma nekufamba kwenguva, kunyanya muzana ramakore rapfuura. Azúa anopa vanhu vazhinji chaivo vakapindira mumatanho aya ebasa rake, vasingasanganisi hupenyu hwake.
Mapepa ehupenyu ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Felix de Azúa
Pierre Reverdy. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo
Paula Gallego. Kubvunzana nemunyori weIink inotibatanidza